I-Systemd iqhathaniswa neSysvinit. Futhi i-Systemd-shim? Indlela enhle? | Kusuka kuLinux
ISystemd okwamanje iyisilinganiso esisetshenziswa kakhulu maqondana ne- "Kernel Boot Systems" (Init) engatholwa ezindaweni ze-Unix, njengeLinux. Yadalwa eminyakeni embalwa edlule ngu Lennart Pottering (ikakhulu) eduze kwe- UKay sievers (Isigqoko Esibomvu sangaphambili). Njengamanje ine- Ilayisense ye-LGPL 2.1 (ngaphandle kwelayisensi ngaphansi kwe-GPL2). Noma kunezinye izindlela, njengabasendulo namasiko I-SysVinit ne-Upstart, kukhona nezinye izindlela ezintsha eziqhubekayo ezifana I-Systemd-shim.
Futhi njengoba isetshenziswa kakhulu, iSystemd nayo ingenye yezimpikiswano futhi kwesinye isikhathi izondwa yingxenye enkulu yabasebenzisi, ezivame ukumelana nobunzima bayo nokubusa ngokweqile noma ukulawula imisebenzi ye-Distros yayo. Ngalesi sizathu, izindlela ezindala noma zesimanje zisakhula emikhakheni emikhulu yoMphakathi we-GNU / Linux.
Njengamanje iSystemd njengephrojekthi yeSoftware yamahhala isingathwa e- GitHub futhi inemibhalo eyanele kuwebhusayithi ye- «I-Freeesktop.org". Futhi ngaphandle kokuthi kwezinye izikhathi sikhulume kakhulu ngakho I-Systemd kubhulogi, isibonelo, kokuthunyelwe okubizwa «Uhlelo Lokukhombisa uD« kusuka kumbhali "Usemoslinux"Namuhla sethemba ukunweba kancane ngokuqhathanisa izici zezinye izindlela zamanje.
1 Kuyini iSystemd?
2 Yini iSysVinit?
3 Kuyini iSystemd-shim?
4 Ezinye izindlela?
ISystemd yiSystem and Services Administrator yamaLinux-based Systems. Kepha, ngokubanzi, ingachazwa futhi njengeqoqo lamabhulokhi ayisisekelo ohlelo lweLinux, njengoba ihlinzeka nge- «Umphathi Wezinhlelo Nemisebenzi » esebenza njengenqubo (PID 1) bese iqala lonke uhlelo.
ISystemd inikeza amandla wokuqhathanisa ashukumisayo, isebenzisa "amasokhethi" ne- "D-Bus activation" ukuqala izinsiza. Ngaphezu kwalokho, inikeza "ekuqaleni" Ngokwesicelo samademoni, ilandelela izinqubo zisebenzisa amaqembu wokulawula we-Linux, ilawula amaphuzu aphakeme kanye nama-automounts, futhi isebenzise ukucacisa ukulawulwa kwensizakalo yokusekelwa okususelwa kokuthengiselana kunengqondo.
Ekugcineni, futhi ikakhulukazi, kungangezwa lokho ISystemd iyahambisana nemibhalo yokuqalisa ye-SysV ne-LSB futhi kuze kube namuhla isebenze njengendawo ephumelele esikhundleni seSysVinit kuma-GNU / Linux Distros amaningi., noma ngabe kukhona ukugxekwa okuvumelekile noma ukuphawula okungekuhle ngakho.
Futhi kufaka phakathi i-daemon yokubhalisa, izinsiza ukulawula izilungiselelo zesistimu eziyisisekelo njengegama lomethuleli, usuku, indawo, ukugcina uhlu lwabasebenzisi abangene ngemvume kanye neziqukathi nemishini ebonakalayo, ama-akhawunti wesistimu, izinkomba nezilungiselelo zesikhathi sokusebenza kanye namademoni ukuphatha ukumiswa kwenethiwekhi okulula, ukuvumelanisa kwesikhathi senethiwekhi, ukudluliswa kwamarekhodi nokuxazululwa kwegama.
Phakathi kokunye, okubhekwa njengokusindayo, okuyinkimbinkimbi futhi okunamandla ku-Distros lapho kwenziwa khona, yize ifeza ngokugculisayo izinhloso zayo eyenzelwe zona. Kangangokuthi iDistro eyaziwayo DEBIAN, Umama wamanye ama-GNU / Linux Distros amaningi, ubeseqala ukuwusebenzisa, okube nomthelela ekwandisweni kwawo.
ISysVinit ingenye yezindala nezamanje Abaphathi bezinhlelo namasevisi amaSystem asuselwa ku-Linux. Isasetshenziswa kabanzi kuningi le- I-GNU / Linux Distros yama-trajectories, nokunye okusha, njenge Devuan.
Kusuka kwaSysVinit njengohlelo kungagqanyiswa okulandelayo:
«Kuyinqubo yokuqala ukuqhutshwa ngemuva kokuthi i-kernel ilayishiwe futhi leyo ezala zonke ezinye izinqubo, isebenza njenge-init daemon futhi imvamisa ine-PID 1. Inikeza inqubo ejwayelekile yokulawula ukuthi iziphi izinhlelo ezingena ziqalise noma zime okuthile izinga lokusebenza ”. Ngokusho kwe-Ex-Debian.org Wiki
Ngokungafani "Init" (Izinhlelo nomphathi wezinsizakalo ukuqala kwezinhlelo ze-Unix), eqale amasevisi kusetshenziswa umbhalo owodwa obizwa ngokuthi "/ Njll / rc", ISysVinit iqale ukusebenzisa i-schema senkomba ku- "/Etc/rc.d/" ebiqukethe imibhalo yokuqala / yokumisa yezinsizakalo ezahlukahlukene.
Futhi ezingeni lamaphakeji nemisebenzi iSysVinit iqukethe izinhlelo zokulawula ukuqala, ukwenziwa nokulanda kwazo zonke ezinye izinhlelo. Lokhu kufaka phakathi: ukuma, i-init, i-killall5, okokugcina, i-lastb, i-mesg, i-pidof, i-poweroff, ukuqalisa phansi, i-runlevel, ukuvala shaqa, i-sulogin, i-telinit, i-utmpdump nodonga. Imininingwane ebalulekile kulabo abafisa ukufaka nokusebenzisa I-SysVinit.
Kuze kube namuhla, impi phakathi kwe- I-Systemd y I-SysVinit bekulukhuni, futhi kufanelekile ukuqhathaniswa nalokho kwe- WhatsApp y yocingo. Futhi ngenkathi kuliqiniso ukuthi ohloniphekile I-SysVinit inamaphutha noma ukulinganiselwa (kuya ngombono womuntu ngamunye), okungenzeka ukuthi ixazululeka ngandlela thile, abasekeli I-Systemd imvamisa ngesibindi lokho I-Systemd okwamanje ingcono kunazo zonke Abaphathi bohlelo nezinsizakalo ukuqala kwezinhlelo ze-Unix zamanje.
Kusuka kulokho, futhi kulowo mzabalazo wazalwa Umkhankaso we- «Init Freedom» (IF) yakhelwe ukuphikisa leyo mpikiswano. Init Inkululeko izama ukubuyisa indlela enempilo ku-PID1, ehlonipha ukwehluka nenkululeko yokuzikhethela. Uma kwenzeka ufuna eminye imininingwane, ungayithola ngokuvakashela isixhumanisi esilandelayo: Umkhankaso «Init Freedom» (IF), imininingwane efana ne- I-GNU / Linux distros ezisebenzisa ezinye izindlela kuSystemd.
Okokugcina, siyahlangana enye indlela emangalisayo yeSystemd-shim. Okusho ukuthi ngokuvumelana nekhasi lepasela le-DEBIAN yiphakheji:
"Isebenzisa umsebenzi weSystemd odingekayo ukuqhuba abasizi bohlelo ngaphandle kokusebenzisa insiza ye-init."
Ukuqonda ukuthi uyakwazi yini "I-Systemd-shim" noma ukuthi isebenza kanjani, kuhle ukuyibona isebenza ku-Distro ezuze kakhulu kuyo, okungukuthi, I-MX-Linux. Okungukuthi ngokusho kwabadali bayo kube ukuthi iMX-Linux inesici sayo esihlukile:
“Ukunikeza umsebenzisi ikhono lokukhetha phakathi kweSystemd neSysVinit kumasistimu afakiwe. Inhlanganisela yemilingo eyenziwe yiphakheji ebizwa nge-Systemd-shim. Kodwa-ke, intuthuko ku-systemd-shim yamiswa esikhathini esithile esedlule, futhi u-DEBIAN usanda kususa iphakethe ezinqolobaneni zeBuster. Siyaqonda ukuthi isimo samanje se-systemd-shim asisebenzi kahle ngenguqulo yeSystemd ku-DEBIAN Buster, ngakho-ke sihlola izinketho ngekusasa le-MX. Ukufeza lokho, into eyodwa esifuna ukuyibheka ukuthi kungenzeka yini ukuthi kuqhutshekwe kuthuthukiswe ama-systemd-shim (nanoma yimaphi ama-systemd patches angadingeka ukuze i-systemd-shim isebenze kahle).
I-Systemd-shim inikeze imiphumela emihle kangako ku-MX-Linux, ukuthi ngaphandle kokunye ukusebenza okuhle kakhulu kanye nobuhle be-Distro eshiwo, I-MX-Linux iphezulu ku-Distrowatch futhi inezinhlelo zesikhathi esizayo zokuqhubeka nokusebenzisa I-System-shim enguqulweni entsha ye-MX-Linux 19 kungekudala izokwethulwa ngokususelwa ku- UDEBHANE 10 (Buster).
Mina ngokwami ​​ngincoma iMX-Linux 18.X ngeSystemd-shim, njengoba kukhanya ngokushesha futhi kusebenza kakhulu. Endabeni yami yangivumela ukuthi ngidale eyami iDistro ngokususelwa kuyo, engangiyibiza ngokuthi: IMilagrOS GNU / Linux.
Ngokufingqa, kufaka phakathi lokho okushiwo, sinezinye izindlela zamanje ze «Ama-System Administrators and Services for Systems »(ama-init systems) we-Linux a:
Ngiyethemba ukuthi lokhu okuthunyelwe kuwusizo kakhulu kuwe, maqondana nokwazi okuncane mayelana nenye ngayinye ye- Init okukhulunyiwe, futhi kuyabasiza ukuthi bakhethe i-GNU / Linux Distro nge-«Izinhlelo nomphathi wezinsiza zeSystem ». Futhi pOkokugcina, kulabo abathambekele kancane ekusetshenzisweni kwe- I-Systemd, Ngincoma ukufunda isixhumanisi esilandelayo: Izinganekwane ezinkulu ze I-Systemd.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Systemd iqhathaniswa neSysvinit. Futhi i-Systemd-shim?
i-systemd iyamunca !!!!!!!
I-athikili enhle kakhulu! Ngiyabonga!
Vele, ngaphandle kokufuna ukuphazamisa, abanayo i-proofreader, ngoba amaphutha esipelingi awonakalisa le ndatshana: imikhakha "ekhuni" (ngemikhakha emikhulu); okuthi "a" kunikelwe (ngo "kube negalelo"), njalonjalo.
Siyabonga ngokufunda i-athikili namazwana akho. Futhi sesivele siyilungisile i-gag yohlelo oyibonile. Sanibonani, mfundi othandekayo!
Njengamanje ngingumsebenzisi wesikhathi eside we-Arch kepha sengikhathele i-systemd umbhedo nezindaba zayo zangemuva.
Ngiyalithanda izwe le-Arch ngakho-ke kulezi zinsuku ngivivinya i-Artix ne-OpenRC kwikhompyutha yami futhi okwamanje iphelele, uma ngingatholi lutho olungajwayelekile ngizoshiya i-Arch ngiqhubekele ku-Artix.
Kuhle kakhulu! Sithemba ukuthi ungathuthela kuleyo Distro ethokozisayo. Siyabonga ngokuphawula kwakho.
Iphrojekthi yeGenode ikhiphe inguqulo entsha ye-OS Sculpt 19.07